Isikole simise umfundi owahlaselwa nguthisha eBloemfontein | News24
Isikole simise umfundi owahlaselwa nguthisha eBloemfontein
Johannesburg - Umama wengane yomfana eneminyaka engu-13 ubudala okusolwa ukuthi washaywa nguthisha uthi isikole saseBloemfontein simise indodana yakhe.
Isigameko saqoshwa kwivideo. Lo wesifazane ocele ukuba lingadalulwa igama lakhe ngenhloso yokuvikela indodana yakhe uthe, i-Academy of Excellence asizange siho lutho ngevideo kwaze kwaphela izinsuku ezinhlanu.
OLUNYE UDABA: Isikole simise abafundi ebebekhalaza
"Bengingazi ukuthi kwenzekani ngendodana ngaze ngathola izingcingo ezivela kwizintatheli zibuza ngesigameko. Isikole asizange sisho luhto kimi kwaze kwasiza abezindaba ababebafakela ingcindezi," kusho lo mama.
Lo wesifazane uthi isigameko senzeka ngoLwesihlanu olwedlule kodwa umyeni wakhe waze washayelwa ucingo isikole ngoLwesithathu.
"Babizela ubaba wengane emhlanganweni kwathi ngemuva kwalokho wangishayela ucingo ethi umfana wami umisiwe esikoleni njengoba kusalinde ukuba aqondiswe izigwegwe, kodwa wenzeni umfana wami?" kubuza lo mama.
Lo mama uthi indodana yakhe kusolwa ukuthi yabandakanyeka kwingxabano nomuney umfundi kubangwa iphepha ngesikhathi uthisha ethi akaphume.
"Kuthiwa wanqaba ukuhamba ngesikhathi uthisha emukhipha wabuza ukuthi kungani kukhishwe yena kuphela ekilasini. Lo thisha wadinwa wamkhipha emdonsa ngesamqaleni, wamuphosa phansi wase emnyathela."
"Ngayibona ivideo kanti futhi ngiphatheke kabi. Ubani owenza into enje komunye umuntu? Ingane yami isahlukumezekile kanti futhi ngicabanaga ukumthathela izinyathelo lo thisha ngoba isikole siyamuvikela nomnyango wezemfundo awusizi," kusho lo mama ethukuthele.
UMnyango wezeMfundo eFree State uthe uyazi ngodaba nangesikole esizimele, iyaluphenya udaba.
Imizamo yokuxhumana nesikole ngoLwesihlanu ayiphumelelanga, kubika iTimeslive.